Sawirro Djibouti - BBC News Somali
20 Disembar 2011
Djibouti waxaa ku yaala saldhiga ugu weyn ee uu Maraykanka ku leeyahay dalalka Afrika ee ka hooseeya Saxaaraha.
Leon Panetta, xoghayaha difaaca ee Maraykanka oo booqasho toddobaadkii hore ku tagey Djibouti oo ay ku taallo saldhiga kaliya ee uu maraykanka ku leeyahay waddamada ka hooseeya saxaraha. Wuxuu xoghayaha sheegay in xooga la saari doono la dagaalanka Al Qacida ee dalalka Soomaaliya iyo Yemen.
Leon Panetta xoghayaha difaaca ee Maraykanka oo la hadlaya askarta Maraykanka ee ku sugan Djibouti. Saldhigan ayaa la soo kiciyaa diyaaradaha Maraykanka ee milatariga ee aan qofna wadin ee weerarka sameeya.